बेन्सेन कम्पनी को लाभ
बर्षौंदेखि बेन्सेन कम्पनी गुणस्तर मा पहिलो, ग्राहकहरु को उद्देश्य को लागी, को विकास मा ध्यान केन्द्रित गर्दछन् अटोमोबाइल भित्री ट्रिम। Bensen उत्पादन को अनुभव को पछिल्लो १० बर्ष मा भएको छ, र हाम्रो आफ्नै कारखाना र उत्पादन कार्यशाला छ, प्रत्येक ग्राहक को लागी आफ्नै कार भित्री सजावट को लागी एक उपयुक्त निर्माण गर्न को लागी। एकै समयमा, हामी सबैभन्दा उन्नत टेक्नोलोजी, र अटो माइक्रोफाइबर छाला को लागी सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर को कच्चा माल अपनाउँछौं। बेन्सेन सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरु उत्पादन गर्दछ, र हरेक विदेशी प्रतिभा संग दीर्घकालीन सहयोग स्थापित गर्न को लागी आशा गर्दछ। यो बेन्सेन छनौट गर्न को लागी पछुताई बिना तपाइँको छनौट हो।
● बेन्सेन कम्पनी को लाभ:
1. Bensen यसको आफ्नै कारखाना छ र अनुकूलित सेवाहरु प्रदान गर्न सक्छ।
2. हामी तुरुन्तै ढुवानी को लागी छाला को एक ठूलो सूची छ।
३.०+ विभिन्न रंगहरु कार microfiber छाला तपाइँको छनौट को लागी
4. Bensen उत्पादनहरु बीएमडब्ल्यू पैटर्न, pinhole बान्की, आदि सहित ढाँचा को एक विस्तृत विविधता मा उपलब्ध छन्, र पनि अनुकूलन तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार उपलब्ध छ।
5. नि: शुल्क नमूनाहरु तपाइँको गुणवत्ता जाँच गर्न को लागी प्रदान गर्न सकिन्छ।
6. पेशेवर टीम कार आन्तरिक को बारे मा तपाइँको समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी।
Ben बेन को लाभsएन उत्पादनहरु:
Microfiber छाला को लाभ:
स्वत: microfiber छालारंगहरु को एक विस्तृत विविधता छ, हामी ग्राहकहरु बाट छनौट गर्न को लागी ४०+ रंगहरु छन्। उच्च रंग स्थिरता। आईएसओ १०५-X१२ विधि को उपयोग गरेर, कार को लागी बेन्सेन को माइक्रोफाइबर छाला को सूखी रबिंग रंग स्थिरता ५ सम्म पुग्न सक्छ। यो N० एन को अधिकतम आँसु शक्ति को सामना गर्न सक्छ। बेन्सेनकोकार microfiber छाला लगभग वास्तविक छाला को रूप मा सास फेर्न को लागी छ।
कडा दाग प्रतिरोध, सफा गर्न सजिलो। कफी र रस दाग एक गीला कागज तौलिया संग हटाउन सकिन्छ; राम्रो लगाउने प्रतिरोध। दैनिक प्रयोग मूलतः कुनै लुगा, धातु सामाग्री घर्षण को उपयोग, तर पनि सफा राख्न सक्नुहुन्छ, लुगा को कुनै स्पष्ट ट्रेस। बेन्सेनअटो साबर छालायसको राम्रो हावा पारगम्यता सुनिश्चित गर्न microfiber साबर छाला, विशेष संरचना को उपयोग गर्दछ; राम्रो ड्राइभि experience अनुभव। यो चालक को शरीर र सीट छिटो ड्राइभि when्ग गर्दा स्लाइडिंग बाट रोक्न सक्छ। रंग पु छाला भन्दा फुलर छ, र दृश्य प्रभाव छाला संग तुलनात्मक छ। केहि रंग संयोजन मा, दृश्य प्रभाव पु छाला भन्दा बलियो छ।
Floor कार भुइँ मैट को लाभ:
१. रेशम पट्टी संरचना, भित्र धूल र गंदगी मैट को प्रभावी नियन्त्रण हुन सक्छ, हरेक दिन को ख्याल राख्नु पर्दैन, तर यो पनि कार सफा राख्न को लागी;
2. उच्च गुणस्तरीय सामग्री, पाँच बर्ष भन्दा बढी को सेवा जीवन;
3. प्रत्येक मोडेल खुट्टा चटाई डाटा, निजीकृत, कुनै सुरक्षा खतरा मापन हुनेछ;
४।कार भुइँ मैट ड्राइभि safety्ग सुरक्षा मा असर गर्दैन, खुट्टा मैट को आकार वास्तविक कार संग तुलना गरीन्छ, महत्वपूर्ण भागहरु, जस्तै क्लच, थ्रोटल आकार मात्र सही डिजाइन गरीएको छ, थोरै असर पर्दैन;
5. रंग व्यापक छ, तपाइँको छनौट पूरा गर्न।
Seat कार सीट कुशन सेट को लाभ:
Bensen कम्पनी कार सीट कुशन कपडा शुद्ध संयंत्र फाइबर, छाला को अनुकूल र आरामदायक, विरोधी जीवाणुरोधी र विरोधी खुजली, सास फेर्न र राम्रो पसीना, विरोधी स्थैतिक, कुनै pilling, निराश छैन, रोल्ड किनारा, नरम र चिल्लो। तल्लो छाला १.४ मिमी उच्च लोच पर्यावरण संरक्षण TPU एक फोम छाला को उपयोग गरेर, सीट कुशन नरम लोच ब्रेस, लगाउन प्रतिरोधी गैर पर्ची, तंग फिट विकृत छैन सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। तल छाला खोक्रो डिजाइन धेरै छाला को breathability बढाउँछ। र उच्च परिशुद्धता कढाई टेक्नोलोजी (ज्यादातर उच्च अन्त कपडा, टोपी र अन्य कढाई मा प्रयोग गरीन्छ) को उपयोग, परम्परागत कढाई प्रक्रिया को औद्योगिक सुधार, १35३५8 सिलाई धडकन, सही तीन आयामी शहरी गगनचुम्बी छाया रूपरेखा।कार सीट कुशन ड्राइभि when गर्दा थकान हटाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाइँलाई आवश्यक छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।